Sprint track cows 100% habayn ku habboon tababarka degdega ah, meelaha tababarka shaqada iyo in ka badan-Shiinaha Gym Turf Manufacturers, Suppliers, Factory-Topflor China Limited
Hoyga>Products>Jimicsiga qurxinta>Jirdhiska Jirdhiska>Gym Turf
dhismaha Jirdhiska Jirdhiska
Ballaca duubka 2m ~ 4m
Dhererka duubista 10m ~ 15m
dhumucdiisuna 10mm, 15mm
Loogu talagalay tababarka degdega ah, Topflor gymturf waa la habeyn karaa 100%. Waxay bixisaa muuqaal cawska dabiiciga ah, rakibadeeduna runtii way fududahay, waxaad isticmaali kartaa cajalad labajibbaaran ama waxaad ku dhejin kartaa dhulka.
Gymturf waxaa lagu soo saaraa dunta cawska ah ee monofilament, fiber UV xasiloon oo leh in ka badan 80.000 tolmo/m². Gymturf waxa lagu heli karaa CAGAAR, BULUUG, CASAAN, MADOW iyo JALE, calaamadaynta waxa lagu samayn karaa dhammaan midabadaas oo lagu daray midabka CAD. Waxaan gelin karnaa summadaada, naqshadaynta aagga shaqada ama wax kasta oo aad qiyaasi karto isku darka dhammaan midabadaas.